မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အဓိကစီးပွားရေး အင်ဂျင်တစ်ခုအဖြစ် မန္တလေး၊ ပြင်ဦ?? - Yangon Media Group
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အဓိကစီးပွားရေး အင်ဂျင်တစ်ခုအဖြစ် မန္တလေး၊ ပြင်ဦးလွင်နှင့် ကျောက်ဆည်ခရိုင်သုံးခုကို ပေါင်းစပ်ရန် စဉ်းစားလျက်ရှိကြောင်း မန္တ လေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်က နေပြည်တော်ရှိ MICC-2 ၌ ကျင်းပသည့် Invest Myanmar Summit အခမ်းအနားတွင်ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က ”New Mandalay Resort City ပေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာ ရည်မှန်းထားတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ မန္တ လေး၊ ပြင်ဦးလွင်၊ ကျောက်ဆည် ဒီခရိုင်သုံးခုကို ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် လူဦးရေအတော်အသင့်ရှိသွားပြီး အဲဒီမှာကျောက်ဆည်ဟာ ဆန် တွေ၊ ပြောင်းတွေနဲ့ ရာသီဥတုလည်း ကောင်းမွန်တဲ့အပြင် စိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့ ဧရိယာလည်းရှိပါတယ်။ ပြင်ဦးလွင်၊ မန္တလေးပေါင်းလိုက်ရင် အဲဒါဟာ နောင်တစ်ချိန်မှာ မန္တလေးရဲ့အဓိက စီးပွားရေးအင်ဂျင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျွန် တော်တို့ရဲ့ grow ကို အဓိကတွန်း အားပေးနိုင်မယ့်အနေနဲ့ ဒါလေးတစ်ခုကို စဉ်းစားထားတာရှိပါတယ်”ဟုဆိုသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့သည် New Mandalay Re-sort City စီမံကိန်းကို ဂျပန်နှင့်ပူး ပေါင်းကာ ၂ဝ၄ဝ ပြည့်နှစ်အထိ Master Plan ရေးဆွဲကာ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်၊ မန္တ လေး-လားရှိုး လမ်းမကြီးဘေး ၂၁မိုင် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဧက ၁ဝဝဝဝ ခန့်တွင်ဖော်ထုတ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က ”ကျွန်တော်တို့ အဓိကကမြို့ကိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေချင်ပါတယ်။ အလားတူ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ပစ္စည်းတွေ ကို ကျန်စေချင်ပါတယ်။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်း သဟဇာတဖြစ် တဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုမျိုးကို လိုချင်တဲ့အတွက် ၂ဝ၄ဝ ပြည့်နှစ်အထိ လှမ်းမျှော်မှန်းပြီး Master Plan ရေးဆွဲထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်အတွင်း ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်လို့မရပါဘူး။ မပြီး ဆုံးတဲ့စီမံကိန်းတွေ အများကြီးရှိတဲ့အတွက် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအနေ နဲ့လုပ်ပါမယ်။ ဧက ၁ဝဝဝဝ မှာ ဧက ၇ဝဝဝ ကို ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးများ၊ နိုင်ငံတော်အဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့စုစည်းပြီးတော့ ဦးစီး ကော်မတီဖွဲ့ပြီး EOI ခေါ်ပါတယ်။ Short Listed Firm လုပ်ပါတယ်။ New Mandalay Resort City ကို ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်း လက်ထဲမအပ်ပါဘူး။ မန္တလေးမှာရှိတဲ့ developer Association တွေ နဲ့တွဲပြီး ဖွံ့ ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ရည်မှန်း ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်”ဟုဆိုသည်။
Invest Myanmar Summit 2019 ပွဲသို့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် တိုင်ဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ၏ ဝန်ကြီးချုပ်များ၊ အစိုးရအဖွဲ့တာဝန် ရှိသူများ၊ ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ၊ နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းရှင်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံတကာသံရုံးများမှ သံတမန်များ၊ နိုင်ငံတကာ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်အသင်းများ စသဖြင့် စုစု ပေါင်း ၁၅ဝဝ ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ပျူခေတ်လက်ရာများရှိသော 'သုံးပန်လှမင်းသမီး သင်္ချိုင်းတော်' ကို ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း တူးဖော် ထိန်
သင်္ကြန်တွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၄၄ မြို့နယ်တွင် အထူးတရားရုံးများ ဖွင့်လှစ်ထားမည်
နေဝင်နေထွက်ကြည့် ရှုရန် ပုဂံရွှေဆံတော် ဘုရားပေါ်သို့ တက်ရောက်ပါက ငွေကြေး မကောက်ခံတော့ဘဲ တစ်ြ??
ရွှေဘိုဒေသရှိ ဆည်ရေသောက် လယ်မြေများ၌ ဘက်ထရီရှော့ခ်တိုက်၍ ငါးရှဉ့် ဖမ်းဆီးသူများ ဝင်ငွေကောင်း